Abrahamu, Baba Vokutenda | Kutenda Kwechokwadi
SARUDZA MUTAURO Abkhaz Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kannada Kazakh Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Mauritian Creole Maya Mixe (North Central) Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMalawi Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nias Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Venda Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
“Baba Vevaya Vose Vanotenda”
1, 2. Nyika yakanga yachinja sei kubva panguva yaNoa, uye zvakaita kuti Abramu anzwe sei nezvazvo?
ABRAMU akasimudza musoro, maziso ake ari kushongwe yaiva refu kupfuura zvivako zvose zvaiva muguta raaigara reUri. * Ikoko kwaiva nemheremhere, uye utsi hwaikwira. Vapristi vamwari wemwedzi vainge vachipa zvibayiro zvakare. Fungidzira Abramu achitenderuka uye achizunguza musoro wake, achifinyamisa chiso chake. Sezvaaifamba achienda kumba achipinda nepakati pevanhu vakawanda vaiva mumigwagwa, angangodaro akafunga nezvekunamata zvidhori kwakanga kwazara muUri. Kunamata ikoko kwakashata kwakanga kwapararira zvikuru munyika kubva panguva yaNoa!
2 Abramu akaberekwa Noa ava nemakore maviri chete afa. Noa nemhuri yake pavakabuda muareka pashure peMafashamo makuru, tateguru iyeye akapa chibayiro kuna Jehovha Mwari, uyo akabva aita kuti muraraungu uoneke. (Gen. 8:20; 9:12-14) Panguva iyoyo, kunamata kwakachena ndiko chete kwaiva panyika. Asi pari zvino, chizvarwa chechigumi kubva kuna Noa zvachaipararira nenyika, vainamata Jehovha vaienda vachiita vashoma. Kwose kwose vanhu vainamata vanamwari vechihedheni. Kunyange Tera, baba vaAbramu, ainamatawo zvidhori, zvimwe achitogadzira zvidhori.—Josh. 24:2.
Abramu akava sei muenzaniso wakakura zvikuru wokutenda?
3. Upenyu hwaAbramu zvahwaienderera mberi, unhu hupi hwakanyanya kuoneka paari, uye tingadzidzei pane izvozvo?
3 Upenyu hwaAbramu zvahwaienderera mberi, akawedzera kusiyana nevamwe vepanguva yake nemhaka yekutenda kwake. Chokwadi, pave paya muapostora Pauro akafemerwa kumudana kuti “baba vevaya vose vanotenda”! (Verenga VaRoma 4:11.) Ngationei zvakabatsira kuti kutenda kwaAbramu kukure. Isu pachedu tinogona kubva tadzidza zvakawanda kuti tingakura sei mukutenda.
Kushumira Jehovha Pashure peMafashamo
4, 5. Abramu angangodaro akadzidza nezvaJehovha kubva kuna ani, uye nei tingati zvinoita kuti tidaro?
4 Abramu akasvika sei pakudzidza nezvaJehovha Mwari? Tinoziva kuti Jehovha aiva nevashumiri vakatendeka panyika mumazuva iwayo. Shemu aiva mumwe wacho. Kunyange zvazvo aisava wokutanga pavanakomana vatatu vaNoa, ndiye anowanzotanga kutaurwa. Zvichida paiva pamusana pekuti Shemu aiva nokutenda kwakakura. * Imwe nguva pashure peMafashamo, Noa akataura nezvaJehovha sa“Mwari waShemu.” (Gen. 9:26) Shemu airemekedza Jehovha uye kunamata kwakachena.
5 Abramu aiziva Shemu here? Zvinoita kuti titi aimuziva. Fungidzira Abramu ari mukomana. Zvinofanira kunge zvaimufadza zvikuru kuziva kuti aiva natateguru mupenyu ainge ararama makore anopfuura 400! Shemu akanga aona uipi hwenyika yaivapo Mafashamo asati aitika, akanga aona Mafashamo makuru akachenesa nyika, kuvambwa kwemarudzi ekutanga vanhu zvavaiwanda panyika uyewo akanga aona mazuva akaipa ekupanduka kwaNimrodhi paShongwe yeBhabheri. Shemu uyo ainge akatendeka haana kubatanidzwawo pakupandukira kwacho, saka Jehovha paakavhiringidza mutauro wevavaki veshongwe, Shemu nemhuri yake vakaramba vachitaura mutauro wekutanga wevanhu, rurimi rwaNoa. Mhuri iyoyo yaisanganisira Abramu. Saka zvechokwadi Abramu akakura achiremekedza Shemu zvikuru. Uyezve, Shemu akaramba ari mupenyu muchikamu chikuru chemakore akawanda akararama Abramu. Saka Abramu angangodaro akadzidza nezvaJehovha kubva kuna Shemu.
Abramu akaramba kunamata zvidhori kwaiitwa nevakawanda muUri
6. (a) Abramu akaratidza sei kuti akanga anyatsofungisisa chidzidzo chikuru cheMafashamo? (b) Abramu naSarai vakararama upenyu hwakaita sei pamwe chete?
6 Chero zvazvingava, Abramu akanyatsofungisisa chidzidzo chikuru cheMafashamo. Akaedza kufamba naMwari sezvakanga zvaita Noa. Ndokusaka Abramu akaramba kunamata zvidhori ndokuva akasiyana nevamwe vaiva muUri, zvimwe kunyange nehama dzake dzepedyo. Zvisinei, akasvika pakuwana shamwari yakanaka kwazvo muupenyu. Akaroora Sarai, mukadzi akanga akasiyana nevamwe kwete chete nemhaka yerunako rwake asiwo nemhaka yokutenda kwake kukuru muna Jehovha. * Kunyange zvazvo vaisava nemwana, hapana mubvunzo kuti vaviri ivavo vakawana mufaro mukuru pakushumira Jehovha pamwe chete. Vakarerawo Roti, mwana wemukoma waAbramu uyo aiva nherera.
7. Vateveri vaJesu vanofanira kutevedzera sei Abramu?
7 Abramu haana kumbobvira asiya Jehovha kuti anamate zvidhori zvainamatwa muUri. Iye naSarai vaida kuva vakasiyana nevanhu veguta iroro vainamata zvidhori. Kana tichizova nokutenda kwechokwadi, tinofanira kunge tichida kuita zvimwe chetezvo. Isuwo tinofanira kuda kuva vanhu vakasiyana nevamwe. Jesu akati vateveri vake ‘vaisazova venyika’ uye kuti izvozvo zvaizoita kuti nyika ivavenge. (Verenga Johani 15:19.) Kana ukazorwadziwa nemhaka yekuti vemumhuri mako kana kuti vemunharaunda vakuramba pamusana pekuti wakasarudza kushumira Jehovha, yeuka kuti hausi wega. Uri kutevedzera muenzaniso wakanaka waAbramu naSarai avo vakashumirawo Jehovha vakatendeka.
8, 9. (a) Chii chakaitika kuna Abramu chisingakanganwiki? (b) Jehovha akaudza Abramu kutii?
8 Rimwe zuva, pane zvakaitika kuna Abramu zvisingakanganwiki. Ane mashoko aakaudzwa naJehovha Mwari! Bhaibheri haritauri zvakawanda nezvekuti akaudzwa sei, asi rinoti “Mwari wokubwinya” akazviratidza kumurume iyeye ainge akatendeka. (Verenga Mabasa 7:2, 3.) Zvichida pachishandiswa ngirozi yaimiririra Mwari, Abramu akaratidzwa zvishoma zvakaita kubwinya kunoshamisa kwaChangamire wezvinhu zvose. Tinogona kungofungidzira kufara kwakaita Abramu achiona kusiyana kwakaita Mwari mupenyu nezvidhori zvisina upenyu zvainamatwa nevanhu vepanguva yake.
9 Jehovha akaudza Abramu kutii? “Buda munyika yako uye ubve kuhama dzako, uende kunyika yandichakuratidza.” Jehovha haana kutaura kuti aifunga nezvenyika ipi, asi akangoti aizoiratidza Abramu. Zvisinei, kutanga Abramu aizofanira kusiya nyika yake nehama dzake. Mutsika dzekuMiddle East yekare, mhuri yaikosha zvikuru. Zvaionekwa serushambwa kuti murume asiye hama dzake achienda kure; kune vamwe zvainge zvakaipa kupfuura rufu chairwo!
10. Nei zvaifanira kunge zvakaoma kuti Abramu naSarai vasiye musha wavo waiva muUri?
10 Zvainge zvakaomera Abramu kuti asiye zvinhu zvakanaka zvaiva muUri. Uchapupu hunoratidza kuti Uri raiva guta rakapfuma raiva nechipatapata. (Ona bhokisi rakanzi “Guta Rakasiyiwa naAbramu naSarai.”) Zvakafukunurwa zvinoratidza kuti Uri yekare yaiva nedzimba dzakanaka chaizvo; dzimwe dzaiva nemakamuri 12 kana kupfuura emhuri nevashandi, ose achitenderera chivanze chakawaridzwa matombo kana zvidhinha zvakanaka. Zvinhu zvakanaka zvaiwanikwa muguta rose zvaisanganisira mvura yemupombi, zvimbuzi uye pombi dzinorasa tsvina. Yeukawo kuti Abramu naSarai vainge vasisiri vaduku; Abramu angangodaro aiva nemakore ari kuma70, Sarai ari kuma60. Abramu anofanira kunge aida kuti Sarai agare zvakanaka uye anyatsochengetwa—zvinhu zvinodiwa nemurume akanaka chero upi zvake kuti aitire mudzimai wake. Fungidzira mibvunzo nezvinhu zvaivanetsa zvavangangodaro vakakurukura nezvazvo. Abramu anofanira kunge akafara zvikuru Sarai paakabvuma kuenda! Kufanana naAbramu, Sarai aida kusiya zvinhu zvose zvakanaka zvaiva muguta ravaigara.
11, 12. (a) Ndezvipi zvaifanira kurongwa uye kusarudzwa vasati vabva muUri? (b) Ungarondedzera sei zvakaitika zuva ravakasimuka?
11 Chisarudzo pachakaitwa, Abramu naSarai vakava nezvakawanda zvokuita. Vaiva nezvakawanda zvekurongedza uye kuronga. Chii chavaizotakura parwendo urwu rwokuenda kwavainge vasingazivi uye chii chavaizosiya? Zvisinei, chainyanya kukosha ihama dzavo nevashandi vavo. Vaizoitei naTera uyo ainge akwegura? Vakasarudza kuenda naye vakamuchengeta kusvikira afa. Anofanira kunge akabvumirana nazvo nemwoyo wose nokuti nhoroondo yacho inoti Tera ndiye akabuda muUri nemhuri yake. Zvinoita sokuti ainge asisanamati zvidhori. Roti mwana wemukoma waAbramu aizoendawo navo.—Gen. 11:31.
12 Pakupedzisira zuva rekusimuka rakasvika. Fungidzira boka racho richiungana kunze kwemasvingo eguta reUri. Ngamera nemadhongi zvainge zvatakudzwa mikwende, zvipfuwo zvainge zvaunganidzwa, mhuri yacho nevashandi vainge vagadzirira, uye vose vainge vachifarira kuenda. * Zvichida vose vaitarisa Abramu, vachimirira kuti avape chiratidzo chokuenda. Pakupedzisira, nguva yacho yakasvika, uye vakasimuka, vachisiya Uri zvachose.
13. Mazuva ano, vashumiri vaJehovha vakawanda vanoratidza sei mafungiro akafanana neaiva naAbramu naSarai?
13 Mazuva ano, vashumiri vaJehovha vakawanda vanosarudza kutamira kunodiwa vaparidzi voUmambo vakawanda. Vamwe vanosarudza kudzidza mumwe mutauro kuti vawedzere ushumiri hwavo. Kana kuti vanosarudza kuedza nzira dzakasiyana-siyana dzokuparidza dzavanenge vasina kumboedza kana kuti dzinenge dzisiri nyore kwavari. Kazhinji zvisarudzo zvakadaro zvinoda kuti munhu azvipire—kuda kurega zvimwe zvinhu zvinenge zvakamunakira. Mafungiro akadaro anorumbidzwa zvikuru, uye akafanana neakaratidzwa naAbramu naSarai! Kana tikaratidza kutenda kwakadaro, tingava nechivimbo chokuti Jehovha achagara achitipa zvakawanda zvikuru kupfuura zvatinomupa. Haambotadzi kupa mubayiro vane kutenda. (VaH. 6:10; 11:6) Ndizvo zvaakaitira Abramu here?
Kuyambuka Rwizi rwaYufratesi
14, 15. Rwendo rwokubva kuUri kuenda kuHarani rwainge rwakaita sei, uye nei Abramu angangodaro akasarudza kumbogara muHarani?
14 Zvishoma nezvishoma vanhu nezvipfuwo zvavo vakasvika pakujairana nerwendo rwacho. Tinogona kufungidzira Abramu naSarai vachiti vakambotasva mhuka vombofamba netsoka, mashoko avaitaura achisangana nekurira kwemabhero airembera pamahanesi emhuka. Zvishoma nezvishoma, kunyange vaya vaisava neruzivo rwakawanda pakufamba vakasvika pakuva nyanzvi pakumisa musasa nepakuuputsa uye kubatsira mukweguru Tera kuti agare zvakanaka pamusoro pengamera kana dhongi. Vakafamba vakananga kuchamhembe kwakadziva kumadokero, vachitevera rwizi rwaYufratesi. Vakaramba vachifamba.
15 Pakupedzisira, pashure pemakiromita 960 vachifamba, vakasvika padzimba dzeHarani, guta rakabudirira raiva pamharadzano yemigwagwa yaishandiswa pakutengeserana nevanhu vekuMabvazuva nevekuMadokero. Mhuri yacho yakamira muHarani, ikambogara imomo. Zvichida Tera akanga asisina kusimba zvokuti arambe achipfuurira nerwendo.
16, 17. (a) Abramu akafadzwa nesungano ipi? (b) Jehovha akakomborera sei Abramu paaigara muHarani?
16 Nokufamba kwenguva, Tera akazofa ava nemakore 205. (Gen. 11:32) Abramu akanyaradzwa zvikuru Jehovha paakataurazve naye. Akadzokorora zvaakanga ambomuudza achiri muUri, uye akawedzera mamwe mashoko pazvipikirwa zvake. Abramu aizova “rudzi rukuru,” uye mhuri dzose dzepanyika dzaizokomborerwa nemhaka yake. (Verenga Genesisi 12:2, 3.) Afadzwa nesungano iyi pakati pake naMwari, Abramu akaziva kuti yakanga yava nguva yokuti aenderere mberi.
17 Zvisinei, panguva iyi paiva nezvakatowanda zvokurongedza, nokuti Jehovha ainge akomborera Abramu paaigara muHarani. Nhoroondo yacho inotaura “zvinhu zvose zvavakanga vaunganidza nemweya yavakanga vawana muHarani.” (Gen. 12:5) Kuti ave rudzi, Abramu aizofanira kuva nezvinhu zvekurarama nazvo nevashandi—mhuri yakakura. Jehovha haagari achipfumisa vashumiri vake, asi anovapa chero zvavanoda kuitira kuti vaite kuda kwake. Asimbiswa kudaro, Abramu akaenderera mberi nokufamba achienda kwaainge asingazivi.
Kusiya upenyu hwavo hwakanaka muUri kwakaita kuti zvinhu zviti omei kuna Abramu naSarai
18. (a) Abramu akasvika rini panguva inokosha munhoroondo yemabatiro anoita Mwari nevanhu vake? (b) Ndezvipi zvimwe zviitiko zvinokosha zvakaitika musi waNisani 14 mumakore akazotevera? (Ona bhokisi rakanzi “ Musi Unokosha Munhoroondo yeBhaibheri.”)
18 Pashure pekufamba kwemazuva akati kuti kubva kuHarani munhu aisvika kuKakemishi, uko mapoka evanhu aiwanzoyambuka rwizi rwaYufratesi. Zvichida paiva panzvimbo iyi Abramu paakasvika panguva inokosha munhoroondo yemabatiro anoita Mwari nevanhu vake. Zvinoita sokuti paiva pazuva rechi14 remwedzi wakazonzi Nisani, muna 1943 B.C.E., Abramu paakatungamirira boka rake kuyambuka rwizi rwacho. (Eks. 12:40-43) Nyika iyo Jehovha akanga avimbisa kuratidza Abramu yaienda nechokumaodzanyemba. Musi iwoyo, sungano yaMwari naAbramu yakatanga kushanda.
19. Chipikirwa chaJehovha kuna Abramu chaisanganisirei, uye chingangodaro chakayeuchidza Abramu nezvei?
19 Abramu akaenda nechekumaodzanyemba munyika yacho, uye vanhu nezvipfuwo vakamira pedyo nemiti mikuru yeMore, pedyo neShekemu. Ikoko Jehovha akataurazve kuna Abramu. Chipikirwa chaMwari panguva ino chakataura nezvembeu kana kuti vana vaAbramu, avo vaizotora nyika yacho. Abramu akafunga uprofita hwakanga hwataurwa naJehovha muEdheni here, huya hwaitaura nezvembeu kana kuti “mwana,” uyo rimwe zuva aizonunura vanhu? (Gen. 3:15; 12:7) Zvichida akafunga nezvahwo. Angangodaro akatanga kunzwisisa kuti aibatanidzwa muchinangwa chikuru icho Jehovha aifunga nezvacho.
20. Abramu akaratidza sei kuonga ropafadzo yaakapiwa naJehovha?
20 Abramu akaonga zvikuru ropafadzo yaakapiwa naJehovha. Sezvaaifamba munyika yacho akangwarira, nokuti vaKenani vakanga vachiri kugaramo, Abramu aimbomira achivakira Jehovha atari, kutanga pedyo nemiti mikuru yeMore, ndokuzovaka imwe pedyo neBheteri. Akadana zita raJehovha, zvimwe achiratidza kuonga kwaaiita Mwari wake nemwoyo wose sezvaaifungisisa remangwana revana vake. Angangodarowo akaparidzira vavakidzani vake vechiKenani. (Verenga Genesisi 12:7, 8.) Zvechokwadi, miedzo yokutenda kwaAbramu yaizovapo nokufamba kwenguva muupenyu. Abramu haana kuisa pfungwa dzake pazvinhu zvaaimbova nazvo muUri. Aifunga zvaakanga apikirwa naJehovha. VaHebheru 11:10 inoti nezvaAbramu: “Akanga achimirira guta rine nheyo chaidzo, iro Mwari ari muvaki nomuiti waro.”
21. Kuziva kwatinoita nezvoUmambo hwaMwari tingakuenzanisa sei nekwaiita Abramu, uye unokurudzirwa kuti uitei?
21 Isu tinoshumira Jehovha mazuva ano tinoziva zvakawanda nezveguta iroro rokufananidzira—Umambo hwaMwari—kupfuura zvaiita Abramu. Tinoziva kuti Umambo hwacho huri kutonga mudenga uye nokukurumidza huchagumisa nyika ino, uye tinoziva kuti Mwana waAbramu akanga agara apikirwa, Jesu Kristu, ava kutonga Umambo ihwohwo. Zvechokwadi ichava ropafadzo yakakura kwatiri kuona Abramu achiraramazve uye achizonyatsonzwisisa chinangwa chaMwari chaaingoziva zvishoma nezvacho! Ungada kuona Jehovha achizadzisa zvinangwa zvake zvose here? Kana zvakadaro zvinokosha kuti urambe uchiita zvose zvakaitwa naAbramu. Ratidza chido chokurega zvimwe zvinhu zvakakunakira kuti ushumire Jehovha, ratidza kuti unoteerera, uye ratidza kuti unoonga zvikuru chero basa raanokupa. Sezvaunotevedzera kutenda kwaAbramu, “baba vevaya vose vanotenda,” mupfungwa yakati, achavawo baba vako!
Guta Rakasiyiwa naAbramu naSarai
Kazhinji mabhuku eZvapupu zvaJehovha ave achibatsira vaverengi kuti vafungidzire upenyu hwevanhu vari muBhaibheri nenzvimbo dzavaigara. Somuenzaniso, kutsanangurwa uku kweguta rakasiyiwa naAbramu naSarai kwakabuda muAwake! yaMay 22, 1988:
“NECHEPAKATI pePersian Gulf neguta reBaghdad pane murwi usingayevedzi wezvidhinha zvevhu. Murwi wacho wakaita semurindi ari ega anoramba achirinda renje rakaita zienda nakuenda. Zvazvinorohwa nemadutu eguruva uye zvichibikwa nezuva rinogocha, zvisaririra izvi zvinogara zviri murunyararo runovhiringidzwa chete nedzimwe mhuka dzinogwauta pano neapo usiku. Izvi ndizvo zvose zvakasara zveraimbova guta guru reUri.
“Asi fungidzira zvainge zvakaita Uri makore 4 000 akapfuura. Panguva iyoyo, pane aimbova mahombekombe ekumabvazuva eRwizi rwaYufratesi, unoona Uri riri guta rakabudira! Dzimba chena dzinopenya pamwe chete nezvitoro zvinotevedza migwagwa yaro inomonyoroka-monyoroka. Vatengesi nevatengi vanoitisana nharo dzemitengo muzvitoro. Vashandi vanobinduka siku nesikati vachigadzira shinda yakachena semukaka kubva pamvere dzemakwai. Waizoona varanda vachidzikisa zvinhu zvinokosha kubva muzvikepe.
“Pane shongwe hombe inogona kuonekwa nemunhu ari chero papi muguta racho. Vanamati vanouya kutemberi iyi kuzopa zvibayiro kuna mwari wavanofunga kuti ndiye akaita kuti pave nokubudirira muUri—mwari wemwedzi Nanna, kana kuti Sin.
“Zvisinei, munhuhwi wezvibayiro zvinopiwa pamusoro peshongwe iyi unonyangadza mumwe murume. Zita rake ndiAbramu.”
Musi Unokosha Munhoroondo yeBhaibheri
Musi wakayambuka Abramu Rwizi rwaYufratesi unokosha panguva dzinotaurwa muBhaibheri. Zvimwe zviitiko zvinokosha zvakaitika musi iwoyo mumakore akazotevera. Pave paya makore 430 achingoti gedye, musi waNisani 14, 1513 B.C.E., Jehovha akasunungura vaIsraeri muusungwa hweIjipiti kuitira kuti vaende kunotora nyika iyo Mwari akanga avimbisa Abramu. (Eks. 12:40, 41; VaG. 3:17) Uye pamusi iwoyo chaiwo muna 33 C.E., Jesu akaunganidza vaapostora vake ndokuita navo sungano yakaita kuti vave vamwe vehurumende yokudenga iyo ichapedza matambudziko ose evanhu munguva pfupi iri kutevera. (Ruka 22:29) Nanhasi, Zvapupu zvaJehovha zvinoungana gore rimwe nerimwe kuti zvichengete Kudya kwaShe Kwemanheru pamusi iwoyo wekarenda yechiJudha—Nisani 14.—Ruka 22:19.
^ ndima 1 Papera makore, Mwari akachinja zita raAbramu achimuti Abrahamu, kureva kuti ‘Baba Vevanhu Vazhinji.’—Gen. 17:5.
^ ndima 4 Saizvozvowo, Abramu anowanzotanga kutaurwa pavanakomana vaTera, kunyange zvazvo aisava mukuru pane vose.
^ ndima 6 Pave paya, Mwari akachinja zita raSarai achimuti Sara, kureva kuti ‘Mwanasikana waMambo.’—Gen. 17:15.
^ ndima 12 Dzimwe nyanzvi dzinoramba kuti ngamera dzaichengetwa nevanhu munguva yaAbramu. Zvisinei, hadzigoni kuratidza izvozvo. Kakawanda Bhaibheri parinotaura zvinhu zvaiva naAbramu rinobatanidzawo ngamera.—Gen. 12:16; 24:35.
Abramu akaratidza sei kutenda panyaya yekunamata zvidhori?
Chii chinokukanga mate mukanwa nezvechido chaAbramu chokubva muUri?
Kutenda kwaAbramu kwakaita kuti ave nezvikomborero zvipi neropafadzo dzipi?
Ungada kutevedzera kutenda kwaAbramu munzira dzipi?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe “Baba Vevaya Vose Vanotenda”